Faritra Boeny: nahazo fankatoavana ny fampiharana ny Dinan’ny Boeny Miray Dia | Région Boeny
Voarafitra ary nahazo fankatoavana avy amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany eto Mahajanga ny fampiharana ny Dinan’ny Boeny Miray Dia, izay mifehy ny fandriampahalemana eny ambanivohitra amin’ny ankapobeny.
Nampahafantatra tamin’ny vahoaka tamin’ny alàlan’ny fampiantsoana mpanao gazety eto Mahajanga izany ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar ny alatsinainy 17 oktobra 2016 tao amin’ny biraony ao amin’ny Bloc administratif Mahajanga.
Niainga tamina fivoriana fakan-kevitra ifotony isaky ny fokontany nanomboka ny taona 2012, fony mbola nisahana ny fisoloatenam-panjakana ny Faritra no nandrafetana Ity bokin’ny Dinan’i Boeny ity. Voarafitra ny boky, ary dia nasiam-panitsiana niaraka tamin’ireo teknisian’ny Fitsarana ara-panjakana sy ny mpitandro filaminana. Efatra taona aty aoriana, ny 20 septambra 2016 dia nahazo ny didy fankatoavana fampiharana avy amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany ny Dinan’ny Boeny Miray Dia.
Ny tena votoatin’ity bokin’ity, izay manaraka ny lalàna 2001-0004 nivoaka ny 25 oktobra 2001 mamaritra ny Dinam-pokonolona eto Magadasikara, dia mifehy indrindra ny fifandraisana eo amin’ny samy fokonolona eo anivon’ny fokontany eny ambanivohitra amin’ireo Distrika telo ato anatin’ny faritra dia i Mahajanga II, Soalala, Mitsinjo ary Marovoay.
Mizara telo lehibe ny bokin’ny Dinan’ny Boeny Miray Dia: voalohany dia miresaka ny fepetra ankapobeny mikasika ny fandriampahalemana, ny hala-botry, ny halatr’omby, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fahadiovan’ny tanàna, ny sosialy ary ny fahasalamana.
Ny tapany faharoa dia mametraka ny rafitra fampiharana ny dina, hita ao anatin’izany ny fisian’ny komity mpanatanteraka ny dina, ny rafitra sy ny fomba fiasany, ny fomba fandraisany sy fampiasany ny volan’ny vono-dina.
Ny tapany fahatelo farany dia mamaritra ireo karazan’ny vono-dina takian’ny komity mifanaraka amin’ny fahadisoana ara-piaraha-monina voafaritra ao anatin’ny boky, ary ireo sazy izay hampiharina amin’ny tsy mpanara-dalàna.
Notsindrian’ny Lehiben’ny Faritra fa mahaleotena tanteraka ny Komitin’ny Dina amin’ny fampiharana ary tsy misy afaka mitsabaka amin’izany ny manam-pahefana isan’ambaratongany. Manana fahafahana hampiakatra ny raharaha anivon’ny isan’ambaratongany kosa nefa izay niharan’ny Dina raha mila izany. Tsy afaka mampihatra ny Dina kosa ny Komity raha vao misy resaka vonoan’olona ao anatin’ny tsy fandriampahalemana hitany, fa anjaran’ny mpitandro filaminana avy hatrany izany.
Hitety ireo Distrika telo ny Lehiben’ny Faritra, ny Préfet an’i Mahajanga, ny lehiben’ny mpitandro filaminana sy ny Fitsarana eto Mahajanga amin’ny fanolorana sy fampiharahana azy ity amin’ny fomba ofisialy, hanazava bebe kokoa amin’ireo fokonolona ny fomba fananganana ny komity mpanatanteraka sy ny fomba fiasany ary ny vono-dina.
Nomarihin’ny Lehiben’ny Faritra fa ny distrikan’Ambatoboeny dia tsy voakasik’ity dina ity satria ny Fitsarana any Maevatanana, faritra Betsiboka no miahy azy. Eo am-pangatahana amin’ny Minisitry ny Fitsarana kosa izy, miaraka amin’ireo tompon’andraiki-panjakana eto an-toerana ny hamerenana an’io Distrika io ho ao amin’ny Fitsarana eto Mahajanga, satria tena misy akony lehibe amin’ny fandriampahalemana ao an-toerana ny fahalaviran’ny fari-piadidina misy azy amin’izao.